Zimbabwe: Doodda ku saabsan aaska Robert Mugabe wali lama xallin - JeuneAfrique.com - SAAXIIBADA RAGGA
ACCUEIL » SIYAASADDA »Zimbabwe: Dooddii duugista ee Robert Mugabe wali lama xallin - JeuneAfrique.com
Zimbabwe: Dooddii duugista ee Robert Mugabe wali lama xallin - JeuneAfrique.com
Maydka Madaxweynihii hore ayaa Arbacadii ka soo duulay Singapore. Cashuur qaran oo dhawr maalmood ah ayaa Khamiista ka bilaabmaysa Zimbabwe, halka aaska Robert Mugabe aan wali la ogayn.
Robert Mugabe, jabhaddii hore ee gumeystaha ee Zimbabwe ka dhigtay boqortooyadiisa
Laga soo bilaabo Singapore, diyaarad qaas ah oo sidday maydkii madaxweyihii hore ayaa galabnimadii Arbacada ka soo degay gegada diyaaradaha ee caasimada Harare, kaas oo magaciisa lagu sheegay.
Waxaa lagu daboolay dahabka, casaanka, cagaarka iyo calanka madow, naxashka waxaa laga soo qaaday diyaaradda waxaana watay askar askar u ah meesha uu badalay Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa, iyo carmalkiisa Grace Mugabe, dhammaantood waxay xirnaayeen madow.
Meesha lagu aasayo hoggaamiyihii dhintay, oo la qorsheeyay Axadda, wali lama shaacinin waana mawduuca, kala-qaybsanaan, khilaaf ka dhex jira qoyska iyo mas'uuliyiinta.
Qoyska hortiisa kuwa la waayey, dawladda iyo kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay jumladda, Emmerson Mnangagwa ayaa ammaanay "Aasaaskii aabihii umadda". "Iftiinka noo horseeday madax-bannaanida ma ahan hadda laakiin shaqadiisa, fikradihiisu way sii wadayaan inay hagaan ummaddan," ayuu yidhi.
Naxashkii madaxweynihii hore ee dalka, ayaa markaa kadib loo geeyay gurigiisii ​​caanka ahaa iyo raaxada lahaa ee ahayd "Blue Roof", oo si aan caadi ahayn u furan dadweynaha markii ugu horreysay.
Meydka Robert Mugabe ayaa lagu wadaa in lagu soo bandhigo garoonka khamiista ee Rufaro khamiista xaafadaha Harare si loogu ogolaado dadka ka kala yimid daafaha dalka inay ku amaanaan halyeeyga geesiga ah ee dagaalka xoreynta, "ayuu yiri wasiirku. Macluumaadka, Monica Mutsvangwa.
Waxay ahayd marxaladdan Robert Mugabe lahaa, 18 Abriil 1980, qaaday qalliinka ee Rhodesia qadiimiga ah xukun cad ka soo qabtay hogaankiisii ​​hore ee cadaanka, Ian Smith.
Markaas gelinka dambe ee Khamiista, waa in meydka loo kaxeyaa tuulada Zvimba, oo boqol kiiloomitir u jirta caasimadda, halkaas oo madaxweynihii hore uu guri ku lahaa.
Aaska rasmiga ah ee ninka, geeridiisa ka dib, waxaa loogu dhawaaqay "geesinimo qaran" by Emmerson Mnangagwa wuxuu ka dhici doonaa subaxnimada Sabtida garoonka weyn ee ciyaaraha ee Harare, kaas oo ay qaadi karaan dadka 60.000.
Lacag-la’aanta madax-weyneyaasha Afrika, ee xafiiska jooga ama hawlgab ah, waxay ahayd inay ku degdegaan xafladan, iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha waddammada waaweyn "saaxiibbada" sida Shiinaha ama Cuba.
Tirooyinka hoggaaminta ah waxaa ka mid ah Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, Madaxweynihii hore ee Cuba Raul Castro, Madaxweynayaasha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, Madaxweynaha Nigeria Mohammadu Buhari ama Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo Felix Tshisekedi.
Majiraan wax macluumaad ah oo laxisaaray arbacada halkaasoo uu madaxweynihii hore ku nasan doono. "Madax dhaqameedyada ayaa go'aamiyay, laakiin waxna iguma aysan oran aniga," mid ka mid ah adeeradii la waayey, Leo Mugabe, ayaa u sheegay saxaafadda.
Mowqifkiisa "geesiga qaranka", Robert Mugabe waa in lagu aaso qalbiga "Goobta Halyeeyada Qaranka", taallo laga dhisay geeska caasimada si ay u martigeliso kuwa ugu caansan "dagaalyahanada xoreynta dagaalka".
Laakiin dhiirrigelinta Robert Mugabe iyo hoggaamiye dhaqameedyada ayaa ka soo horjeedda: waxay ku doodayaan in qofka dhintay uu muujiyey rabitaankiisa in lagu aaso tuulada Zvimba, halkaas oo uu guri ku lahaa.
Tan iyo dhicitaankii Robert Mugabe, xiriirkii madaxweynihii hore iyo qoyskiisa iyo dhaxlihiisii ​​Emmerson Mnangagwa, oo uu ku tilmaamay inuu yahay "khaa'in", ayaa caan ku ah xun.
Bishii Nofeembar 2017, ciidanku waxay ku riixeen bixitaanka ka dib go'aankiisii ​​ahaa inuu shaqada ka eryo Emmerson Mnangagwa ku adkaysashada xaaskiisa, Grace, oo markaa si xamaasad leh u doorbiday hantida ninkeeda.
Kadib Niger, Rwanda waxay soo dhaweyn doontaa qaxootiga Afrikaanka ah ee ku xayiran Liibiya - JeuneAfrique.com
Akere Muna waxay ka jawaab celineysaa ku dhawaaqida Wadahadalka Qaranka